Oldtimerauktion am Tegernsee - 30.06.2018 - နောက်ဆုံးရသတင်းများ 24
နံနက် 30. April 2018 kommen am Tegernsee in Bayern mehr als 50 Oldie PKW unter den Hammer von Versteigerer Frank Ehlert. Das Auktioshaus aus Potsdam hat die Fahrzeuge einer privaten Sammlung um Fahrzeuge von weitere Liebhabern erhänzt. So ist ein umfangreicher Katalog enstanden, der für Fans aller Fahrzeugarten hochwertige Liebhaberstücke bereit hält.
29.06.2018 13:00 သို့ 19:00 Uhr
30.06.2018 09:00 သို့ 13:00 Uhr
ဝဘ် ..: http://online.auktionspunkt.de
အီးမေးလ်က : pr@auction-point.com
မော်ကွန်းတိုက် လကိုရွေးချယ်ပါ June 2018 (401) May 2018 (713) April 2018 (721) မတ်လ 2018 (735) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018 (755) ဇန္နဝါရီလ 2018 (757) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (645) နိုဝင်ဘာလ 2017 (805) အောက်တိုဘာလ 2017 (760) စက်တင်ဘာလ 2017 (674) သြဂုတ်လ 2017 (690) ဇူလိုင်လ 2017 (314) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017 (1)
အဖြစ်အပျက် (76) ရှယ်ယာ (155) ဘာလင် (106) လက်ကျန်ရှင်းတမ်း (68) ကုန်စည်ဒိုင်-TV ကို (99) လိုက်နာခြင်း (68) ထိန်းချုပ်ခြင်း (88) ဒေတာလုံခြုံရေး (63) ဒစ်ဂျစ်တယ် (151) အဖိုးတန်သတ္ထု (86) ဘဏ္ဍာရေး (104) ခဲ (65) ခေါင်းဆောင်မှု (93) စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ် (101) ငွေကြေးခဝါချမှု (68) စီမံခန့်ခွဲမှု (124) ကျန်းမာခြင်း (76) ရှေ (516) ဟမ်းဘတ် (67) ဟောင်ကောင် (79) ဟောင်ကောင်ကုန်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကောင်စီ (HKTDC) (78) ဟော်တယ် (68) အိမ်ခြံမြေ (66) အိုင်တီ (86) ကနေဒါ (224) Kobalt (60) ဆက်သွယ်ရေး (148) ကွေးနီ (206) ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (137) ငွေဖြစ်လွယ် (75) Liquiditätssteuerung (74) စီမံခန့်ခွဲမှု (68) စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (63) မက္ကစီကို (73) မြူးနစ် (66) နီဗားဒါး (124) rating (75) Rohstoff-TV ကို (85) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (131) ငှေ (411) Swiss Resource (63) ရာထူး (130) ရောင်းအား (70) စီးပွားရေးကို (71) Zink (78)